ဘီယာသောက်သုံးခြင်းမှရရှိနိုင်သော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ – ADS Myanmar Blog
ဘီယာသောက်သုံးးခြင်းမှလည်း ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်ပါတယ် တန်ဆေးလွန်ဘေးဖြစ်နိုင်တာမို့ ချိန်ဆ၍သောက်သုံးမည်ဆိုလျှင် အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်နော်
အီတလီမှ ပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ ဘီယာသောက်သုံးခြင်းဟာနှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းကို ၄၂ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်
(၂) ဦးဏှောက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဉာဏ်ကောင်းစေတယ်
ဘီယာသောက်ခြင်းက သင့်ရဲ့ တီထွင်မှုစွမ်းအားကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသေးတယ် ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းတွေ၊ စဉ်းစားတွေခေါ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဘီယာသောက်တဲ့သူတွေက
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အမျိူးသားတွေမှာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ် အသက်ကြီးတဲ့အမျိူးသားတွေမှာ အင်ဆူလင် ထုတ်ပေးပေးမယ့်မယ် အဲ့ရှိတဲ့ အင်ဆူလင်က
အဲ့လိုဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေကို ဘီယာကို အလွန်အကျွံမဖြစ်အောင် ထိန်းပြီးသောက်သုံးခိုင်းတဲ့အခါမှာ
အင်ဆူလင် အလုပ်မလုပ်တဲ့ဆီးချိုရောဂါကို လျော့ချနိုင်ကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အလွန်အကျွံမဟုတ်ဘဲ သေချာထိန်းပြီးတော့သောက်နော်
(၄) လန်းဆန်းပြီး အလုပ်ပိုလုပ်နိုင်တယ်
စပိန်မှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းပြီး သူတို့ရဲ့
ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန် 104 ဒီဂရီထိရောက်အောင် လှုပ်ရှားမှုလုပ်ခိုင်းပြီး အနားယူတဲ့အခါရေသောက်သုံးပြီးအမောဖြေတဲ့သူထက် ဘီယာသောက်သုံးပြီး အနားယူတဲ့သူက လျင်လျင်မြန်မြန် လန်းဆန်းကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်
သွေးဖိအား မြင့်ခြင်းက ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်
ဝိုင် တို့ ကော့တေးတို့သောက်သုံးတဲ့သူတွေထက် ဘီယာသောက်သုံးတဲ့သူတွေက သွေးဖိအားလျော့ချ
မှုကိုအကူအညီပေးကြောင်း ဟားဗတ်က သုတေတနပညာရှင်တစ်ဦးက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်
(၆) အရိုးတွေကို သန်မာစေတယ်
ဘီယာတစ်နေ့ ၂ခွက်ပုံမှန်သောက်ပေးခြင်းက သင့်ရဲ့အရိုးတွေကို သန်မာစေပါတယ် တစ်နေ့၂ခွက်သောက်သုံခြင်းက အရိုးတွေကို ၄.၅ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်သိပ်သည်းစေပါတယ် ဒါပေမယ့် ၂ခွက်ထက်ပိုမိုသောက်သုံးခြင်းကတော့ အရိုးတွေရဲ့ သိပ်သည်းဆ ၅.၂ရာခိုင်နှုန်းထိ လျော့ကျစေနိုင်တဲ့အတွက် အများကြီးသောက်သုံးဖို့ မသင့်လျော်ပါဘူး
ဘီယာကို အလွန်အကျွံမဖြစ်အောင် ထိန်းပြီးသောက်သုံးတဲ့ခြင်းဟာ ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် အရမ်းအများကြီးသောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင် အစာပြွန်ကင်ဆာကိုပါစေနိုင်ပါတယ်။ ဝိုင်၊ အရက်တို့ထက် ဘီယာကို အလွန်အကျွံမဟုတ်ဘဲ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်သောက်သုံးခြင်းက ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းတို့ရေ . . . လိုသေးတဲ့အချက်များရှိလျင်လည်း ထပ်ဖြည့်ပေးဦးနော်။ အခုလို အစားအသောက်များကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ Ads.com.mm ပရိသတ်ကြီးအတွက် အစားအသောက်များကို https://www.ads.com.mm/agriculture-food လင့်ခ်အတိုင်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်နော်
Hello, I am Nway Htet Wai Aung and I am working at MHTi-M Hospitality & Tourism Institute asaMarketing & Public Relations. The reason why I write on wordpress is that I would like share news and articles of MHTi. Thanks	View all posts by NwayHtet
Author NwayHtetPosted on August 1, 2017 August 1, 2017 Categories Health, Lifestyle
Previous Previous post: ads နှင့်အတူ စိမ်းလဲ့တင် အပန်းဖြေစခန်းကို သွားဖို့အခွင့်အရေးကြီး
Next Next post: ပိုနေတာတွေရောင်းပြီး ငွေဆောင်မှာအပန်းဖြေကြမယ်